MM Godey Iyo 600 oo Arday Oo Ka Qalinjabisay Kuliyada Xirfadaha Iyo Farsamooyinka Gacanta - Cakaara News
MM Godey Iyo 600 oo Arday Oo Ka Qalinjabisay Kuliyada Xirfadaha Iyo Farsamooyinka Gacanta
Godey(cakaaranews)Axad 12ka March 2017. Xaflad qalinjabin ah oo ay ku qalinjabinayeen 600 oo arday oo waxkabaranaysay kuliyada xirfadaha iyo farsamooyinka kaladuwan islamarkaana bartay xirfadaha kaladuwan ee sida Furnitureska Birta iyo Alwaaxa, Cunto karinta iyo laxaamadaha kaladuwan ayaa si rasmi ah uga dhacday MM Godey.
Hadaba, xafladan oo ay kasooqaybgaleen maamulka Gobolka, Maamuka magaalada Godey Hooyooyinka iyo martisharafkale ayaa waxaa furitaankeedii khudbad kasoojeediyay Wasiirka Xafiiska Tababarda, Xirfadaha iyo Farsamooyinka Gacanta DDSI mudane Naasir Xasan Cabdi oo ugu horayn u hanbalyeeyay dhamaan qalinjabiyayaasha iyo waliba maamulka iyo macalimiintiii ardaydan waxsoobaray. Wuxuuna xusay in ardaydan qalinjabisay ay mid katahay tubaha lagaga baxayo saboolnimda islamarkaana larabo in dalku kaga mid noqdo wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa kubuuriyay qalin jabiyayaasha in ay noqdaan kuwo ficil kumuujiya cilmigii aybarteen islamarkaana ugu shaqaysta si daacad ah kadib markii ay ku noqdaan degmooyinkii ay kakale yimaadeen. Wuxuuna carabka udhuftay in sanadsanadka kadanbeeya lasii xoojin kor uqaadista ardayda barata xirfadaha iyo farsamooyinka kaladuwan.
Dhankakale, masuuliyiintii kuliyadaha caafimaadka iyo kuliyada xirfadaha ayaa iyana dhankooda khudbado kaladuwan kasoojeediyay oo taabanaya dhinacyo kaladuwan.